Booliska K/Afrika oo ka digay farriimaha aan la xaqiijin - BBC Somali
Booliska K/Afrika oo ka digay farriimaha aan la xaqiijin
18 Abriil 2015
Image caption Rabshado ku saleysan ajaaniib nacayb ayaa galaaftay nolasha iyo hantida dad badan oo ajaaniib ah.
Booliska dalka Koonfur Afrika ayaa ugu baaqay dadka in ay joojiyaan farriimaha aan la xaqiijin ee ku saabsan weerarada ka dhanka ah dadka ajaaniibta ah ee la soo dhigayo baraha xiriirka bulshada, iyadoo sabatuna ay tahay in ay sababayaan argagax.
Booliska ayaa sheegay in ay ka walwal qabaan waxa ay ku sheegeen in ay yihiin waxyaaba aan sal iyo raad toona lahayn in ay sii kicinayaan rabshadaha ka dhanka ah ajaaniibta dalkaasi.
Ilaa iyo 30 qof ayaa loo xiray rabshado xalay ka dhacay magaalada Johannesburg, waxaana sidoo kale la burburiyay ganacsiyo dhowr ah oo ay leeyihiin dadka ajaniIbta ah.
Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay weerarada ka dhanka ah ajaaniibta, kuwaasi oo soo billowday kaddib markii boqorka qabiilka Zulu Goodwill Zwelethini uu sheegay in ajaaniibtu ay tahay in ay dalka ka baxaan.
Dadka soo galootiga ah ayaa lagu eedeeyaa in ay shaqooyinka kala wareegeen dadka deegaanka oo sabool u badan.